Aakar October 08, 2009
शुरु-शुरुमा एउटा शब्दले कुनै मूर्त वस्तु वा वस्तु-समूहलाई मात्र जनाउँथ्यो होला। अमूर्त वस्तु, सोचाइ र चिन्तनको अभावमा तिनलाई जनाउने शब्दको आवश्यकता पनि भएन। त्योभन्दा पहिले बाँदरको जस्तै आवाज निकालेर औंलाले देखाउँदै आ-आ ऊ-ऊ गर्नुपर्थ्यो होला। अझै पनि हामी आफूले नचिनेको कुनै चिज कतै देख्यौं भने ऊ त्यो भनेर देखाउँछौं।
नेपाली भाषालाई ऊ भन्ने यो एक अक्षरे शब्दले जति शायदै कुनै अर्को शब्दले गुन लगाएको होला। जस्तोसुकै नयाँ कुरा किन नहोस्, कुनै चिजको नाम नआओस् वा बिर्सियोस्, हाम्रो बचाउको लागि ऊ सदा तत्पर रहन्छ। नेपालीमा ऊ भनेपछि जे पनि हुनसक्छ। कसैले ऊ भनेर भनिएको कुनै कुरा बुझन सकेन भने त्यो लाटो मानिन्छ। यसको बारेमा एउटा उखानै छ― ऊले भन्दा कुन्नि के ल्याउने जस्तो!
ऊ जस्तै जेलाई पनि मिल्ने शब्द अरू नभए पनि एक भन्दा बढी अर्थ लाग्ने शब्द धेरै छन्― तर, भिनाजु, कोइराला, आदि। एउटै शब्दबाट धेरै कुरा अथवा धेरै शब्दबाट एउटै कुरा जनाइनु वास्तविकता हो वा भाषाले सिर्जेको कृत्रिमता, कहिलेकाहीं ठम्याउन समेत अप्ठेरो पर्नसक्छ। जस्तो अङ्ग्रेजीका तीन शब्द see, look र watch को सट्टा हिन्दीमा एउटा शब्द देखना नै पर्याप्त छ, नेपालीमा दुई शब्द हेर्नु र देख्नु छन्। यी शब्दले इङ्गित गर्न खोजेका कुरा तीन वटा हुन्, दुई वटा हुन् वा एउटै मात्र हो? हिन्दीभाषीहरू एउटा कुरो भन्न किन अङ्ग्रेजीभाषीलाई तीन-तीन वटा शब्द चाहियो भन्ने ठान्छन् होला। अङ्ग्रेजीभाषीहरूलाई चैं तीन वटा बेग्ला-बेग्लै कुरालाई कसरी हिन्दीभाषीहरू एउटै ठान्छन् जस्तो लाग्दो होला। अर्कोतिर अङ्ग्रेजीभाषी पनि तातो र पिरो छुट्याउन नसकेर त होला, दुवैलाई hot भन्छन्। अरूलाई चिया र खुर्सानी दुवैले पोल्छ, हामी नेपालीलाई जिब्रोको स्वादले चिया तातो र खुर्सानी पिरो हुन्छ।
यस्तो खोतल्दै जाँदा थुप्रै अरू कुरा पनि निस्किन्छन्। जस्तै, अरूले जापानीहरूलाई किन एउटै आवाज र का लागि दुइटा अक्षर र र ल चाहिएको होला भन्ठान्छन् होला। नेपालीभाषीलाई पनि एउटा आवाज स का लागि तीन-तीन वटा अक्षर स, ष र श चाहियो जस्तो लाग्न सक्छ। यी सबको विश्लेषण र संश्लेषण भाषाशास्त्र र विशेषज्ञका लागि उपयुक्त होला। यो त खाली एउटै शब्दले कसरी विभिन्न कुरा व्यक्त गर्न सक्दा रहेछन् भनेर छक्क पर्दै गरिएको एउटा साधारण र जिज्ञासु टिपोट मात्र हो।
यस्तै शब्दको थप एउटा रोचक उदाहरण खानु पनि हो। नेपालीमा भात (ठोस), पानी (तरल) र चुरोट (धुवाँ) सबैलाई खानु भनिन्छ, तर अङ्ग्रेजीमा यी कुरा भन्न तीन बेग्ला-बेग्लै शब्द eat, drink र smoke चाहिन्छ भने हिन्दीमा दुइटा खाना र पिना भने पुग्छ। खानु कै कुरा गर्दा नेपालीमा ठोस, तरल र धुवाँ मात्र होइन अरू धेरै कुरा पनि खाइँदोरहेछ। सम्झेका केही खाने कुरा तल पस्केको छु।
चुटाइ (पिटाइ, कुटाइ) खानु, काम खानु, घर खानु, कुरा खानु, गम खानु, सिल्टिम्मुर खानु, गरिखानु, रिन खानु, जागिर खानु, कर्म खानु, बल्ड्याङ खानु, दिन (उमेर) खानु, घुस खानु, म्वाइँ खानु, धन (सम्पत्ति, पैसा) खानु, धोका खानु, गोता खानु, गाली खानु, शपथ (किरिया) खानु, चक्कर खानु, ठक्कर खानु, हण्डर खानु, लोप्पा खानु, हावा खानु (स्वच्छ, चिसो हावाका लागि डुल्न निस्कनु), हावा खानु (असफल हुनु), मनले खानु, कमाई खानु, कपाल (टाउको) खानु, कान खानु, आँखा खानु, नुन खानु, मासु खानु, हरेस खानु, हप्की खानु, जोल्टिङ खानु, सातो खानु, फल (फलफूल वा कुनै प्रयत्नको फल) खानु, अपुताली खानु, कावा खानु (चरा/चङ्गा)।
खानु जस्तै अरू शब्द पनि छन्। जस्तै― काट्नु। रूख (घाँस) काट्नु, बाटो काट्नु (बाटो पार गर्नु), बाटो काट्नु (गन्तव्यमा पुग्ने बाटो छोट्याउनु), बाटो काट्नु (नभेटी जानु), डाँडो काट्नु, कुरा काट्नु, नाम काट्नु, पुर्जी काट्नु, टिकट काट्नु।
भाषाप्रति चासो र चाख राख्नेहरूले यस्ता र यस्तै अन्य विशेषताहरूको खोजी गरी सङ्कलन गर्न सके राम्रै हुन्छ होला।
असोज महिना को लागि निस्किएको हिमाल खबर को डबल अंक हेर्दै थिँए । पत्रिका को अन्त्यतिर भएको यो 'लेख' साह्रै नै मन पर्‍यो, अनि यहाँहरु लाई पनि रमाइलो लाग्ला भन्ने सोचेर यहाँ ब्लगमा कपि पेष्ट गरेर राखेको छु । यो पढिसकेपछि केही केही कुरा जानेको जस्तो पनि लागिरहेको छ । नेपाली मा एक शब्द ले अनेक अर्थ दिनेरहेछन्, तर सबै भन्दा बढि अर्थ दिने शब्द चाँहि 'खानु' नै रहेछ जस्तो लाग्यो है यो पढिसकेपछि ! 'हिमाल खबरपत्रिका' बाट साभार गरिएको यो लेख भाषा प्रति चाख राख्नेलाई उपयोगी हुनसक्छ ।
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा October 8, 2009 at 4:04 PM
रमाइलो लाग्यो आकार जी यो शव्द र अर्थको टासो पढेर .. अरु कुरा पनि खोतल्न मन लाग्यो ।
gufgaf.com October 9, 2009 at 12:34 AM
हा हा !! कस्तो रमाईलो !! थाहा भइरको तर मतलब नभाको कुराहरू !!
Asha October 9, 2009 at 1:23 AM
Your interesting artical made me feel refresh AAKAAR jee thanks hai ..
Dilip Acharya October 9, 2009 at 8:02 AM
रमाईलो लेख रहेछ ।
badri October 9, 2009 at 10:20 AM
badri November 12, 2010 at 4:17 AM